Inetlọ Ọrụ Hzọ Manuflọ Mgbakwunye Nsukka & Ndị na-ebubata ya - Cablọ Ọrụ Cablọ Chinalọ Hlọ Chinalọ Chinalọ Chinalọ Ọrụ
Cabinet Door N'ezie Soft Soft Zoro Ezo mgbabere uzo
Cabinet ụzọ n'ezie adụ nso zoro ezo mgbabere uzo mere site zinc alloy ihe. Ihe mgbaba a na-ejikarị ọnụ ụzọ kabinet rụọ ụlọ. The n'ezie zoro ezo mgbabere uzo dị iche iche na troditional omenala ngwá ụlọ mgbabere uzo. Gaghị ahụ ahụ mịnye aka na kọọdụ kabinet. Mee ka oche ụlọ gị dị mma. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na mgbanaka anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
H11 American ụdị obere ogwe aka ihu etiti mgbabere uzo 1/2 machie
Okwu Mmalite:H11 American ụdị obere ogwe aka ihu etiti mgbabere uzo 1/2 machie ejikarị maka ihu etiti kichin & ime ụlọ ịwụ cabinets. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nodị No.: H11
US2D12 American ụdị 2D mgbanaka mgbabere uzo
Okwu Mmalite:US2D12 American ụdị 2D mgbanaka mgbabere uzo-eji maka ihu etiti kichin & ime ụlọ ịwụ cabinets. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nodị No.: US2D12
US2D12S 2D Soft nso kọmpat Face Frame mgbabere uzo 1/2 ″
Okwu Mmalite:US2D12S 2D Soft nso kọmpat Face Frame Mgbabere 1/2 ″ na-ejikarị eme ihe maka ihu kichin na kichin. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nodị No.: US2D12S
Zoro ezo Frame mgbabere uzo 3/4 ″ maka American ụdị cabinets
Okwu Mmalite:Zoro ezo ihu na-adabere 3/4 ″ maka ụdị ụlọ ndị America na-ejikarị eme ihe maka kichin ihu na kichin. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nodị No.: US2D34S
US2D114 American ụdị 2D mgbanaka mgbabere uzo
Okwu Mmalite:US2D114 American ụdị 2D mgbanaka mgbabere uzo-eji maka ihu etiti kichin & ime ụlọ ịwụ cabinets. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nodị No.: US2D114
3D ukpụhọde ihu etiti mgbabere uzo 1 inch machie maka kichin & ụlọ ịwụ cabinets
Okwu Mmalite:3D ukpụhọde ihu etiti mgbabere uzo 1 inch machie maka kichin & ụlọ ịwụ cabinets, na-enweghị adụ-emechi, 1 ″ machie, kpara ígwè, nickel plated. Na 45mm ịghasa oghere ụkpụrụ, ntuziaka ịghasa na ngwa. Ndozi Cam na taabụ 4 maka ntinye dị mfe na ihu etiti ihu. Standard ngwugwu ọ bụla na-enweghị kposara, nnukwu mbukota na katọn.
Nodị No.: US3D1
US3D1S American ụdị 3D ukpụhọde nkịtị mgbabere uzo
Okwu Mmalite:US3D1S American ụdị 3D ukpụhọde nkịtị mgbabere uzo na-eji maka ihu etiti kichin & ime ụlọ ịwụ cabinets. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nodị No.: US3D1S
3D edozi ọnụ ụzọ maka ihu ihu ihu ụlọ 1/2 ″
Okwu Mmalite:3D Kemeghi n'ọnụ mgbabere uzo ihu kabinet 1/2 "na-eji maka ihu etiti kichin & ime ụlọ ịwụ cabinets. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nodị No.: US3D12
1/2, Hydraulic adụ nso 3D edozi kichin ihu etiti kabinet ụzọ mgbabere uzo
Okwu Mmalite:1/2, raulic Hydraulic dị nro dị nso 3D na-edozi kichin ihu ụlọ ihu na ihu na-ejikarị eme ihe maka ihu kichin & ụlọ mposi. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nodị No.: US3D12S
1-1 / 2 door Hydraulic ụzọ dị nso mgbabere uzo maka ihu ihu kichin & ụlọ mposi
Okwu Mmalite:1-1 / 2 door Hydraulic ụzọ dị nso mgbabere uzo maka kichin kichin & ụlọ ịsa ahụ na-ejikarị eme ihe maka kichin ihu na kichin. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nodị No.: US3D112S
1-1 / 4 ″ machie 105 Degree 2 Cam Press na Face Fraịị miting mgbabere uzo
Okwu Mmalite:1-1 / 4 ″ machie 105 Degree 2 Cam Press na Face Fraịị Cabing Mgbakwunye na-ejikarị eme ihe maka kichin ihu na kichin. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nodị No.: US3D114